Madaxweyne Xaaf: “Maamul goboleedyadu ciidamo u gaar ah ayey samaysan doonaan” ( dhegayso ) – Radio Daljir
Madaxweyne Xaaf: “Maamul goboleedyadu ciidamo u gaar ah ayey samaysan doonaan” ( dhegayso )
Oktoobar 21, 2018 1:49 g 0
Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaafa oo kusugan magaalada Garoowe ee caasimada dowladda Puntland ayaa sheegay in madaxda maamul goboleedyada ay samaysan doonaan ciidamo ugaar ah .
Xaaf ayaa sheegay in dowladda hada jirta aysan ahayn dowladd ay aqonsan yihiin oo u shaqan karta sidii loogu talagalay .
Hadalkan ayuu ka sheegay shirkii golaha iskaashiga ee maamul goboleedyada oo maanta ka furmay magaalada Garoowe .
Golahan oo ayaa haatan waxaa ku midaysan afar maamul goboleed oo kala ah , Puntland , Galmudug Jubland , iyo koonfur galbeed , marka laga reebo mamaulka Hir-shbele oo dowladda la heshiiyay .
Dowladda Faderaalka Soomaaliya oo mar kale ku celisay in ay diyaar u tahay wadahadal ay la gasho dowlad goboleedyada